Nampandoa onitra goavana ho an’ny tranonkala tsy miankina iray ireo mpandrindra ny media Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2018 9:34 GMT
Rosiana mpanao gazety mpanadihady, mpahay siansa ara-politika, mpanoratra ary mpanolotra fandaharana amin'ny radio i Yevgeniya Albats. Voasazy mandoa onitra goavana ny gazetibokiny, The New Times, noho ny tsy fanomezana tatitra ara-potoana tany amin'ny sampan-draharaham-panjakana mpanaramaso ny media ao Rosia. Sary avy amin'i Evgeniy Isaev (CC 2.0).
Voasazy handoa onitra goavana 22 tapitrisa robla (334.400 dolara Amerikana) ny The New Times, tranonkala mahaleotena sady gazetiboky teo aloha miavaka amin'ny feo mitsikera.
Vola mihoa-pampana tanteraka izany ho an'ny fampahalalam-baovao madinika any Rosia. Ho fampitahana, mahazo iray tapitrisa robla (15.200 dolara Amerikana) isam-bolana ny fampahalalam-baovao mpanao fanadihadiana MediaZona, izay mitovitovy amin'ny habe sy ny endriky ny The New Times, vola tsy ampy akory handoavana ny fampandehanana ny asa.
Namoaka ny vaovao tao amin'ny fantsony Telegram i Alexey Venediktov, lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny Akon'i Moskoa, tambajotra radio tsy miankina voalohany ao Rosia post-Sovietika:
Nosazian'ny fitsarana handoa onitra 22 tapitrisa robla ny gazetiboky New Times sy Yevgeniya Albats [lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny New Times] noho ny tsy fandefasana tatitra tany amin'ny Roskomnadzor [sampan-draharaham-panjakana mpanaramaso ny media ao Rosia].
Mazava ho azy fa midika bankirompitra sy fanakatonana avy hatrany ho an'ny gazetiboky izany.
[…] Reko avy amin'ny gazetiboky sy ny mpisolovavan'i Albats, Vadim Prokhorov izany
Nampahatsiahy ireo mpanara-dia azy i Venediktov fa tamin'ny alatsinainy, nanao tafatafa tao amin'ny Akon'i Moskoa niaraka tamin'i Alexey Navalny, mpikatroka mpanohitra malaza ao Rosia i Yevgeniya Albats.
Voasazy handoa onitra teo ambany lalàna iray zara raha ampiasaina ao amin'ny fehezan-dalàna Rosiana ny News Times, lalàna izay mitaky ny fampahalalam-baovao mba hitatitra any amin'ny Roskomnadzor, mpandrindra ny media ao Rosia mikasika izay loharanom-bola vahiny. Tsy misy antontan'isa momba ny tranga hafa amin'ny fampiasana izany lalàna izany, saingy nanamarika ny MediaZona fa niangona 7 tapitrisa robla (106 400 dolara) ny totalin'ny onitra amin'ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny media tahaka izany hatramin'ny taona 2015 .
Ny lalàna dia mitaky amin'ireo fampahalalam-baovao Rosiana izay mandray fanomezana avy amin'ny vahiny mba hanome tatitra isan-telovolana any amin'ny Roskomnadzor – saingy indraindray izy ireo tsy omena fotoana hanaovana izany. Tany am-piandohan'ity taona ity, nahazo fangatahana avy amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna Rosiana ny New Times mba hitatitra momba ny fanampiana raisin'izy ireo avy any ivelany. Navoaka tamin'ny 10 May ny fangatahana, kanefa 7 May ny fe-potoana farany hanaovana izany.
Nampidirina tamin'ny faran'ny taona 2015, tonga tao anatin'ny fonosana fehezan-dalàna mifehy ny fampahalalam-baovao tsy miankina, vondrona fiarahamonim-pirenena ary ONG ny lalàna. Ao anatin'ny rafitra fandrindrana miha-mafy hatrany ao Rosia, nanjary mora loatra ho an'ireo fikambanana ny mandefitra amin'ireo fitsipika “kapoka (sazy) telo dia esorina ny fahazoan-dàlana handefa fandaharana”, na hiatrika onitra amin'ny zavatra toy ny tsy fahavitana manazava fa fikambanana mpampihorohoro voaràra any Rosia ny ISIS isaky ny miresaka azy anaty lahatsoratra.
Na dia voasoratra ao anatin'ny paika hisorohana ny fampihorohoroana sy ny ekstremisma ary ny heloka bevava hafa aza ireo lalàna sy fitspika ireo, ny fampiharana ny lalàna avy amin'ny manam-pahefana no milaza fa mety ny asa fanaovan-gazety tsy miankina no tena kendrena: tsy mbola nisy fampahalalam-baovao mpomba an'i Kremlin nampitandremana na voasazy tamin'izany.
Raha ampifandraisina amin'ny fisalasalan'ireo mpamoaka dokambarotra hividy dokambarotra avy amin'ny famoahana ara-politika mety mampidi-doza, mahita ny fampahalalam-baovao madinika toy ny The New Times izay tsy ny governemanta rosiana no tompony mivantana na an-kolaka fa atahorana hatrany ny fahaveloman'izy ireo.
Any Rosia, vitsy ireo fomba ara-dalàna hahazoana vola amin'ny alalan'ny dokambarotra na mivarotra kopia voatonta. Nampitsahatra ny fanontana an-tsoratra manokana ny New Times tany am-piandohan'ny 2017, ary niditra tanteraka tamin'ny nomerika taorian'ireo olana tsy tapaka amin'ny fitsinjarana ny gazety, ary nanaiky ihany ny fanomezana avy any ivelan'i Rosia nony farany, ka miatrika izay mety ho fahafatesana miadana avy amin'ny fanjakam-birao.
Ary ankoatra ireo sakana ara-pitsipika ireo, dia misy ny herisetra tsy mitsaha-mitombo, ny fandrahonana sy ny fampitahorana an'ireo mpanao gazety tsy miankina ao Rosia, toy ireo “fanomezana” mampatahotra tamin'ny herinandro lasa teo, izay napetraka teo am-baravaran'ny gazety iray malaza, Novaya Gazeta.